အဝတ်လျှော်စက်များနှင့်ရေတံခွန်များ။ ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအမြင်။ | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, Aprilပြီ 8, 2007 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 Douglas Karr
Lisa က Reichelt ဒီစိတ်ကူးအတူတကွထားတော်မူ၏ တင်ဆက်မှု အတွက် IA ထိပ်သီးအစည်းအဝေး:
ဘဏ္Yာရေးနှစ်: IA = သတင်းအချက်အလက်ဗိသုကာ, UCD = အသုံးပြုသူဗဟိုပြုဒီဇိုင်း
ဒီဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်မန်နေဂျာတွေအတွက်တော့ဒီဟာကဆော့ဝဲလ်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုအတွက်စိတ်ကူးကောင်းတင်ဆက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်တွင်ရေတံခွန်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ပြီးဤချဉ်းကပ်မှုသို့ကူးပြောင်းနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို“ အဝတ်လျှော်စက်” နည်းလမ်းအဖြစ်အမှန်တကယ်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ
ဤဆလိုက်ရှိုးသည်ရိုးရှင်း။ တိကျသည်။ ရေတံခွန်များ၏အပြစ်အနာအဆာသည်မထင်မှတ်ပဲဖြစ်သည်။ ရေကိုညွှန်ကြားသည်၊ ရပ်တန့်။ မရနိုင်၊ တစ်လမ်းတည်းသို့ရွေ့လျားနိုင်သည်။ သငျသညျကျဆုံးခြင်း၏အောက်ခြေတွင်၌သငျသညျတာပေါ့ရှုပ်ထွေးသောမျိုးကိုသိဘယ်တော့မှ!
PS: တင်ဆက်မှု၏ post-it / ဓာတ်ပုံနည်းစနစ်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်။ အလွန်ကွဲပြားခြားနား!
Tags: သတင်းအချက်အလက်ဗိသုကာleisa reicheltထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှုsoftware ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရေတံခွန်
WordPress NiceAdmin Plugin ဗားရှင်း 1.0.0 ထုတ်ပြန်သည်